प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाउँदै नेकपाकै नेताहरूले भने – ओलीको हालत ज्ञानेन्द्रकै जस्तो हुनेछ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाउँदै नेकपाकै नेताहरूले भने – ओलीको हालत ज्ञानेन्द्रकै जस्तो हुनेछ!
काठमाडौ । पछिल्लो परिवर्तित घटनाक्रमका कारण नेकपामा पनि भाँडभैलो भएको छ । नेकपा भित्र चर्किएको विवादले संसद भंग भएको छ । संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै पोखरामा नेकपाकै नेता कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला जलाएका छन्।
आइतबार दिउँसो पोखराको महेन्द्रपुलमा नेकपाकै युवा तथा विद्यार्थी नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला जलाएका हुन् । उनीहरुले ओली विरुद्ध नारावाजी समेत गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम सच्याउन र पार्टी निर्णय मानेर अगाडि बढ्न आग्रह समेत गरेका छन्।
प्रदर्शनपछि आयोविजत कोणसभामा बोल्दै अनेरास्ववियूका नेता क्षितिज सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको कदम देश र जनताविरुद्ध भएको भन्दै तत्काल सच्याउन आग्रह गरे। उनले असंवैधानिक कदम नसच्याए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हात बनाइदिने चेतावनीसमेत दिए।
‘हामी प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी, देश र जनताविरुद्ध चालेको गलत कदम सच्याउन आग्रह गर्दछौँ’, कोणसभामा सापकोटाले भने, ‘यदि सच्याउन मान्नुभएन भने उहाँको हालत पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै हुन्छ।’ इताजाखबरबाट ।
खुसीको खबर: भारतीय मिडियाको तारो बनेकि मनिषा कोइराला बुवा-आमासँगै नेपाल आउने तयारी
१०५ दिन पछी निर्मला हत्याको पोस्मार्टम रिपोर्ट बारे आयो यस्तो कसैले नसोचेको समाचार